Safiirka Jsl Ufadhiya Itoobiya Oo Ka Warbixiyay Xaalada Caafimaad Ee Suldaan Maxamed Xirsi Qani… | Yool News
Safiirka Jsl Ufadhiya Itoobiya Oo Ka Warbixiyay Xaalada Caafimaad Ee Suldaan Maxamed Xirsi Qani…
January 6, 2020 - Written by Yool News
Safiir Yuusuf Maxamud Guuleed ayaa shaaca ka qaaday inay aad u wanaagsan tahay xaalada caafimaad ee Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi-Qani, Ilaahay mahadii, ducadii shacabka Somaliland-na Ilaahay aqbalay, isla markaana, raaciyey in wakhtiga uu ka soo baxayo Cusbitaalka, jawaabteeda ka sugaynaa dhakhaatiirta gacanta ku haya daawayn tiisa.
Safiirka JSL ee Itoobiya Amb. Yuusuf Maxamuud Guuleed oo maanta ka jawaabay su’aalo la xidhiidha xaalada caafimaad ee Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi-qani, oo weriye Maxamuud Walaaleye, hawlwadeenada Wargeyska Dawan, ku weydiiyey khadka Fariimaha ayaa sheegay inaanay xukuumada Somaliland kaalin ka qaadan daawayntiisa keliya, balse damaanad-qaaday guud ahaan, maalintii la keenay caasimada Addis Ababa, ilaa maanta-na Safaarada JSL ee Itoobiya oo kaashanaya ehelka Suldaan Maxamed garab-taagan tahay.
“Xaaladda Suldaanku aad bay u wanaagsan tahay. Ilaahay ducadii wuu aqbalay oo imika xitaa wuu fadhiisan karaa. Garashadiisu way joogtaa oo aad buu u fiican yahay, waxaanu helay daryeel caafimaad loo hagar-baxay, dawlad iyo ehelba.” Ayuu kaga jawaabay su’aal laga weydiiyey xaalada caafimaad ee Suldaan Maxamed .